မန္တလေးကလူနာမှာ ပိုးထပ်မတွေ့ရင် ပထမဆုံး ဆေးရုံဆင်း...
5 เม.ย. 2563 - 12:09 น.
လူနာနံပါတ် ၁၅ ဟာ လူနာနံပါတ် ၈ နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့တဲ့ လူနာနံပါတ် ၁၁၊ ၁၂ နဲ့ ၁၃ (ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ၃ ဦး) တို့ ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာတွေ လာရောက် ထုတ်ယူတဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး မတ်လကုန်ပိုင်းမှာ ဖျားနာချောင်းဆိုး မောပန်းလာတဲ့အတွက် ဆေးရုံသွားပြရာက ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
တီးတိန်က ကိုဗစ်၁၉ လူနာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကို အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်
อัลบั้มภาพ မန္တလေးကလူနာမှာ ပိုးထပ်မတွေ့ရင် ပထမဆုံး ဆေးရုံဆင်းရသူ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ